Labada Xiddig ee Mayman iyo Xasaasi oo galabta Taariikh ka sameyn kara tartanka General Daa’uud – Gool FM
(Muqdisho) 21 Nof 2019. Kooxaha Horseed iyo Muqdisho City Club ayaa galabta ku ballansan garoonka Eng Yariisow ciyaarta final-ka koobka xiisaha badan ee General Daa’uud.
Kooxaha Muqdisho City Club iyo Horseed ayaa ku coltami doona cooska mac-malka ee yaala garoonka Eng Yariisow, iyagoo dheeshan midba midka kale ay u tahay ciyaar wayn, Horseed ayaa ku rajo wayn inay ka aar-gudato wiilasha Muqdisho City Club oo sanadkii hore ka qaaday koobkan, halka Muqdisho City Club ay u dagaalami doonto inay difaacato koobkan, si sanadkii labaad oo xiriir ah ay qaado.
Haddaba waxaa jira xiddigo galabta taariikh sameyn kara kuwaasoo tiro dhowr jeer gaaray final-ka koobka General Daa’uud kuna guuleystay koobkan in ka badan labo jeer.
Xiddigaha kala ah Maxamuud Cabdi Nuur (Mayman) iyo Xasan Cabdi Nuur Geesey (Xasaasi) oo u ciyaaran kooxda Horseed ayaa isha lagu hayaa taariikhda ay galabta ka samayn karaan final-ka Koobka General Daa’uud.
Maxamuud Cabdi Nuur (Mayman) ayaa markii shanaad gaaray final-ka koobka General Daa’uud isagoo koobkan ku guuleystay saddex jeer oo la qaaday kooxaha kala ah Elman oo hal jeer ah iyo Jeenyo oo labo jeer uu la hantay, sidoo kale hal final waa laga qaaday isagoo matalayey kooxda Horseed, halka galabta uu dheelayo final-kii shanaad, haddii uu ku guuleystana waxa uu u noqon doona midkiisii afaraad oo ku guuleysto xirfaddiisa kubadda cagta.
Ciyaaryahan Mayman wuxuu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan ee ka dheela horyaalka Somali Premier League si la mid ah waxaa lagu tiriyaa xiddigaha ugu xawaaraha badan ee jooga dalka.
Sidoo kale Ciyaaryahan Xasan Cabdi Nuur Geesey (Xasaasi) ayaa ka soo muuqday final-ka Koobka General Daa’uud tiro afar jeer ah, isagoo hantay 2-ka mid ah, waana xilligii uu joogay kooxda Jeenyo, sido kale hal koobka General Daa’uud waa laga qaaday waana final-kii sanadkii la soo dhaafay ay kooxdiisa Horseed laga faramarooqday, halka uu galabta dheelayo final-kiisii afaraad ee Koobka General Daa’uud.
Xasaasi waa nooc ciyaaryahan oo ka dagaalama khadka dhexe, isagoo la la meel dhigo xiddiga reer France ee Paul Pogba, marka loo eego sida uu kubadda u maamulayo iyo sida uu xariifka ugu yahay kubbadaha laadabka xorta ah.
Labadan ciyaartoy ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxda Jeenyo, halka sidoo kale iminka ay matalaan kooxda Horseed, galabtana ay raban midba midka kale in uu riyadiisa u rumeeyo oo ku aaddan final-ka Koobka General Daa’uud.
Waa sidee xaaladda dhaawac ee Salah, Robertson, Matip, Gomez & Shaqiri ka hor kulanka ay Sabtida ciyaareyso Kooxdooda Liverpool ee Premier League?